Ihe ohuru nke PowerDNS Recursor 4.3, ihe nkesa DNS nkesa, dị njikere | Site na Linux
Depụta ụdị ọhụrụ nke PowerDNS Recursor 4.3, ihe nkesa DNS nkesa
N'afọ gara aga, anyị kwurula ebe a na blọọgụ banyere PowerDNS nke bụ ihe nkesa sava DNS mepere emepe na nke kachasị mma nhọrọ ị ga-abanye na akaụntụ ebe ọ bụ na nke a bụ isi. bụ ihe nkesa DNS na nchekwa data (n'ime nke ọ na-akwado ọtụtụ ọdụ data dị iche iche, gụnyere MySQL, PostgreSQL, SQLite3, Oracle na Microsoft SQL Server, yana LDAP) na doo ederede ederede na EKPERE usoro, ka backend na-eme ka ọ dị mfe jikwaa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ntinye DNS.
Ugbu a oge a ka anyị ga-ekerịta ozi banyere oru ngo mepụtara site na otu isi ya na nke natara ụdị ọhụụ nke bụ "PowerDNS Recursor".
1 Banyere PowerDNS Recursor
2 Ihe ohuru na PowerDNS Recursor 4.3
Banyere PowerDNS Recursor
Nke a bụ maka recursive nsụgharị nke aha y dabere na otu ndabere nke tinye sava ahụ PowerDNS, ma na ihe dị iche na ha na-mepụtara dị ka akụkụ nke dị iche iche mmepe cycles na tọhapụrụ dị ka iche iche ngwaahịa.
PowerDNS Recursor (pdns_recursor) bu ihe ngosiputa DNS, nke na-agba ọsọ dị ka usoro dị iche.
Akụkụ a nke PowerDNS bụ otu eri, mana Edere ya dika inwe otutu eri, site na iji Boost na MTasker ọba akwụkwọ, nke bụ mfe multitasking ekwenye n'ọbá akwụkwọ. E nwekwara ya dị ka ngwugwu kwụ ọtọ.
Ihe nkesa na-enye ngwaọrụ maka nchịkọta ọnụ ọgụgụ nchịkọta, na-akwado ntighari ngwa ngwa, nwere igwe arụnyere maka ijikọ ndị ọkwọ asụsụ Lua, na-akwado DNSSEC, DNS64, RPZ (Nzaghachi Iwu Zaa), na-enye gị ohere ijikọ ndepụta ojii.
E wezụga nke ahụ -enye gị ohere ka ịdekọ mkpebi pụta na ụdị nke na-ekekọta mpaghara faịlụ. Iji hụ na arụmọrụ dị elu, a na-eji usoro njikọ multiplexing njikọ nke oge a na FreeBSD, Linux, na Solaris (kqueue, epoll, / dev / poll), yana parser na-arụ ọrụ dị elu maka ngwugwu DNS nke nwere ike ijikwa iri puku kwuru iri puku ihe ndị yiri ya. .
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele njirimara ya na njikọ a.
Ihe ohuru na PowerDNS Recursor 4.3
Na ụdị ọhụrụ a, Mmepe rụrụ ọrụ iji gbochie ozi leaks banyere ngalaba achọrọ ma mee ka nzuzo dịkwuo elu, usoro mbelata nke QNAME (RFC-7816), nke na-arụ ọrụ na «zuru ike«, Ndi nyeere ndabara.
Isi ihe nke usoro bụ na solver ekwughị aha nnabata zuru ezu na gị upstream aha ihe nkesa na-ajụ ajụjụ.
N'aka nke ọzọ ike abanye oku arịrịọ e emejuputa atumatu na ihe nkesa ikike na nzaghachi ha na usoro dnstap (Maka iji ya, achọrọ mgbakọ na nhọrọ -enable-dnstap.
A na-enye nhazi oge nke ọtụtụ arịrịọ na-abata na njikọ TCP ma weghachite nsonaazụ ozugbo ha dị njikere ma ọ bụghị n'usoro arịrịọ n'ahịrị. Oke nke concurrent arịrịọ kpebisiri ike site «max-concurrent-arịọ-kwa-tcp-njikọ".
Emebere usoro nyocha ngalaba na nso nso a (NOD) na enwere ike iji mata ngalaba enyo ma ọ bụ ngalaba metụtara omume ọjọọ, dị ka mgbasa nke malware, ikere òkè na phishing, na iji jikwaa botnets.
Usoro a dabere na njirimara ngalaba enwetabeghị mbụ ma nyochaa ngalaba ọhụrụ ndị a. Kama ịgagharị na ngalaba ọhụrụ megide nchekwa data niile nke ngalaba elele anya, nke chọrọ nnukwu ego, NOD na-eji usoro SBF puru omume (Anụ na oge ntoju Myọcha) iji belata ikike nchekwa na CPU. Iji mee ya, ị ga-ezipụta «ọhụrụ-ngalaba-nsuso = ee»Na ntọala.
E wezụga nke ahụ mgbe ị na-agba ọsọ na systemd, usoro Ntughari site na PowerDNS ugbu a na-agba ọsọ dị ka onye ọrụ na-enweghị ọrụ onye pdns-recursor kama mgbọrọgwụ. Maka sistemụ na-enweghị systemd na enweghị chroot, ndabara ndekọ / var / ọsọ / pdns-recursor ugbu a na-eji na-echekwa akara anya na pid faịlụ.
N'ikpeazụ, maka ndị nwere mmasị ịnwale ya, ha nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa nke ntinye ya njikọ a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Depụta ụdị ọhụrụ nke PowerDNS Recursor 4.3, ihe nkesa DNS nkesa
Timedatectl na Hwclock: Iwu iji tọọ ụbọchị na oge na Linux